बैशाख ४, २०७८ ०९:१६:१६
नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलर बराबर १ सय २० रुपैयाँ २८ पैसा बिक्रीदर तोकेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्चविन्दुमा पुगेको हो । यो हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो ।
जीडीपमा असर पर्ने त पक्का छदैछ, के अहिले डलर महंगिदै जानुका कारण पनि कोरोना नै हो त ? नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको माग कम हुँदाको असर अमेरिकी डलरमा परेको बताउछन् । पेट्रलियम पदार्थको पदार्थको माग कम भएसँगै अहिले मूल्य पनि घटेको छ । यसको कारण कोरोना नै भएको डा. भट्टले जानकारी दिए । कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी गिरावट आएसँगै यस क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले डलरमा लगानी गर्न शुरु गरेको उनले बताए ।
लगानीकर्ताले डलरलाई विस्वास गरेका कारण वलियो भएको उनले बताए । ‘कोरोना भाइरसका कारण प्रोजेक्टहरु बन्द हुँदा पेट्रोलको माग घट्यो, माग घटेपछि मूल्य घट्ने भइहाल्यो’ उनले भने, ‘जसका कारण लगानीकर्ताहरुले प्रतिफल राम्रो आउने भन्दै डलरमा लगानी गरे, यसले डलर बलियो बन्दैछ ।’गानीकर्ताहरुले पेट्रोलियममा भन्दा धेरै डलरमै लगानी सुरक्षित हुने देखेको उनले बताए । पेट्रोलियमको तुलनामा अमेरिकी अर्थतन्त्रप्रति अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुको कन्फिडेन्स बढेको उनको बुझाई छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, चैत्र ७, २०७६, ११:०३:००
नेपाली बजारमा आज पहेंलो धातु सुनको मूल्य प्रतितोला १०० रूपैयाँले घटेको छ । पुरा पढ्नुहोस्